Warshad wax soosaarka mobilada, shirkado cusub - Soosaarayaasha wax soo saarka mobilada Shiinaha
Qiimaha warshadda 11.1v 4.4ah 3S 18650 baakad loogu talagalay hawo-mareenka, CPAP, koofiyadda alxanka korontada iwm.
Waxaan bixinaa qiimaha warshad 11.1v 4.4ah 3S 18650 xirmo batari ah hawo-qaadade, CPAP, Koofiyadda alxanka korontada iwm Baakadka batteriga waxaa loo isticmaali karaa koofiyadda alxanka korantada, Ventilator, CPAP, Solar light codsiyada kale ee ku habboon. Cabir yar oo leh awood dhab ah oo sare. guddiga loo dhisay gudaha si ay u sii hayaan batteriga cimri dheeri iyo badbaado.Asoo saaraha PLM wuxuu bixiyaa dhammaan noocyada adeegga batteriga loogu talagalay. Soosaarista soosaariddu waa dhameystiran tahay, waxqabad fiican, aamin ah oo la isku halleyn karo, tilmaamayaal kala duwan ayaa soo gaadhay shuruudaha qeexitaanka batteriga qaranka, waxayna dhaafeen hay'adaha sharciga ee quseeya gudaha iyo dibada amniga iyo baaritaanka waxqabadka, badeecooyinka inta badan waxaa loo iibiyaa suuqa gudaha iyo sidoo kale Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Ameerika, Yurub, Japan, koonfur bari Aasiya iyo suuqyo kale.